ရေးသားသူ may16 at Wednesday, October 28, 2009
နေ့အိပ်မက် October 28, 2009 at 4:55 PM
မမယုံတာအကုန်လုံး နေ့အိပ်မက်လည်း ယုံတယ်... :) ထည့်သာမရေးတာ. အဲဒါအကုန်ယုံတယ်... ကျေးဇူးနော်မမ.. ရေးပေးတာ.. ချစ်ဖို့ကောင်းလိုက်တာ မမက(နောက်ထပ်တဂ်ဖို့ ဖားထားတာ.. :P)
တောင်ပေါ်သား October 28, 2009 at 6:51 PM
ယုံကြည်ချက်မရှိတဲ့ လူဟာ လမ်းမသိပဲ လမ်းလျှောက်နေသလို ဖြစ်နေမှာပါ။ ဒီအတွက် လူတိုင်းဟာ ယုံကြည်ချက်လေးတွေ ရှိပြီး ရှေ့ကို ကောင်းမွန်စွာ ဖြတ်သန်းနိုင်ကြပါစေ။
တော်သေးတာပေါ့ အန်နာဗွန်စီ သောက်လို့း) အိုဗီမင် ဆိုလား ဘာလား မှားပြီး မသောက်တာ ကံကောင်း အဟေးဟေးးး
မိုးခါး October 28, 2009 at 9:04 PM
အစ်မရဲ့ ယုံကြည်မှုလေးတွေ လာလေ့လာသွားတယ်နော် ..း))
ပျော်ရွှင် ချမ်းမြေ့ပါစေး)
မိုးစက်အိမ် October 29, 2009 at 12:12 AM
အစ်မတို့ ရဲ့ယုံကြည်ရာ ခံယူချက်လေးတွေကို လာခံစားကြည့်
သွားတယ်ဗျာ . . . အဲတစ်ခုတော့ သိချင်တယ် မမေ နဲ့ မပန်း
နှစ်ယောက်စလုံးခံစားချက်ကို ပေါင်းရေးထားတာလား တစ်
ယောက်တည်း က ရေးတာလားဆိုတာ :D
Anonymous October 29, 2009 at 12:48 AM
မပန်းမေ ရေးသည်လို့ ပြောရမယ် ထင်မိပါကြောင်း။ ဒီ
ကောင်းသော ယုံကြည်ချက်တွေ တည်မြဲပါစေ
ယုံကြည်ချက်တွေ ခိုင်မြဲပါစေဗျား...။ လူဆိုတာ ယုံကြည်ချက်တော့ရှိရမယ်ဗျ ဒါမှလဲ ရှေ့ဆက်လှမ်းနိုင်မှားကိုးဗျ...နော
ဒဏ္ဍာရီ October 29, 2009 at 11:35 AM
"ရ" ပါသမျှ အတဂ့်ခံတာ မမလည်း ပါတာကိုးးးး
ဟုတ်ပါတယ် မမရေ ... ရိုးရိုးကျင့်၊ မြင့်မြင့်ကြံ ဆိုတဲ့ မမရဲ့ အဆိုလေးကို ထောက်ခံပါတယ်။ ဒဏ္ဍာရီကတော့ ယုံကြည့်စရာတွေ များနေလို့ အကုန် မရေးလိုက်နိုင်တော့ဘူး။ ဒီတော့ အားလုံးထဲက အကောင်းဆုံးတွေကို လိုက်ပြီး မှတ်သား ကူးယူနေပါတယ် မမ။
ကိုတိုး October 29, 2009 at 3:12 PM
ယုံကြည်ချက်လေးတွေ ခိုင်မြဲပါစေခင်ဗျာ။ ကိုယ့်ယုံကြည်ချက်နဲကိုလည်းအဆင်ပြေပါစေခင်ဗျာ။
မိုးထက်အိမ် October 30, 2009 at 12:27 PM
ယုံကြည်ရာလေး လာဖတ်သွားတာ.... :)
ယုံကြည်တာတွေတူတယ် ... ထည့်ရေးထားတာ မရေးထားတာတော့ ကွာသွားတယ် .... :)
Dream October 30, 2009 at 11:04 PM
ယုံကြည်မှုတွေ ယုံကြည်ချက်တွေ ခိုင်မြဲပါစေတီတီမေနဲ့တီတီပန်းရေ...
စည်သူ October 31, 2009 at 11:46 AM
မိဘတစ်ဦးက သားသမီး ဆယ်ရောက်ကို လုပ်ကျွေးနိုင်တယ်
သားသမီး ဆယ်ယောက်က မိဘ တစ်ဦးကို မလုပ်ကျွေးနိုင် ဘူးဆိုတာ မျက်မှောက်လောကမှာ မြင်နေရတာပဲ..
ကိုကောင်းတာလုပ်ရင် ကောင်းတာဖြစ်မယ်ဆိုတာကိုတော့ ယုံကြည်တယ်..
သူများတွေကို မကောင်းမပြောသလို ကို့ကိုပြောလာရင်လည်း သသည်းခံပါတယ်
ဟုတ်ပါတယ်.... မိမိကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုရှိမယ်ဆိုရင် ဘာမဆို အောင်မြင်နိုင်ပါတယ်.. မတော်လို့ ရှုံးခဲ့ရင်တော့.. ဒါဟာ အဖြေမထွက်တဲ့ ပုဒ်စ္ဆာရဲ့ ချွင်းချက်လို့ ယူဆလို့ရပါတယ်..
မနေနိုင်လို့ သူများစက်ကနေ လာမန့်တာ အမရေ..
တစ်ခါတစ်လေ မမန့်ရရင် စကားမပြောတတ်တဲ့ လူအလို ဖြစ်နေတယ်..